🥇 ▷ Khadadka loo yaqaan 'IP Air', ipad iyo mini mini iPad ayaa laga heli karaa App Store ✅
Khadadka loo yaqaan ‘IP Air’, ipad iyo mini mini iPad ayaa laga heli karaa App Store
LINE loogu talagalay ipadka waxaa loo heli karaa BILAASH xagga ipadka ee loo yaqaan ‘Store Store’
Kusoo xir meesha dukaanada Apple, App Store, oo ah mid ka mid ah barnaamijyada fariimaha farriimaha badan ee ugu caansan ee adeegsadayaasha aaladda moobaylka, waxaan ka hadlaynaa codsiga cusub ee LINE ee loogu talagalay iPad Air, iPad iyo iPad mini Retina, kiniiniyada Apple. Markaa waad garan kartaa dhamaan astaamaheeda oo waad kala soo bixi kartaa.
Waa maxay dalabka LINE ee loogu talagalay ipadka?
IPad-ka iyo iPad mini mini ee LINE ayaa hadda la heli karaa. LINE waa codsi fariin fariin codsiyo deg deg ah ku dheehan tahay Kaas oo aad ku wici karto wicitaano isla markaana aad u diri kartid farriimaha gebi ahaanba bilaash ah, markasta oo aad rabto, meel kasta iyo iyadoon xad lahayn.
Hawlaha ugu muhiimsan ee barnaamijkan loogu talagalay aaladaha macruufka waxaad ka heli kartaa suurtagalnimada:
Ku raaxayso awoodda farriimaha degdegga ah ee bilaashka ah, meel kasta oo adduunka ah.
Soo hel qaab cusub oo kacaan ah oo lagula xiriiro xariiqda xariiqda toosan ee LINE.
La wadaag fiidiyowyada, sawirrada, farriimaha codka ama xitaa goobtaada.
Astaamaha nooca ‘LINE’ ee loogu talagalay ipadka iyo aaladaha kale
LINE wuxuu ku siinayaa astaamaha ugu awoodda badan ee aad ka heli karto codsi qoraal ah, kuwaas ka mid ah waxaad ka heli kartaa:
Ku raaxayso dhammaan fursadaha shaashadda ballaaran.
U adeegso LINE markaad fiirinayso shabakada ama aad fiirinaysid fiidiyaha.
Isku xirnaan weyn, oo loo heli karo kombiyuutarka, ipadka iyo taleefannada casriga ah.
Nooca IPad: Ku habboon in loo isticmaalo guriga.
Nooca kumbuyuutarka: ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu isticmaalo shaqadaada.
Nooca casriga ah: Qaado LINE-kaaga marwalba.
Tilmaamaha sida loo isticmaalo LINE loogu talagalay ipadka
Waa muhiim inaad fiiro gaar ah yeelatid gudaha LINE loogu talagalay ipadka, koontooyinka cusub ee LINE lama abuuri karo, si ay u awoodaan in la isticmaalo nooca loo yaqaan ‘ipad’ waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro koonto nooca ah ilaa taleefannada casriga ah. Waqtigaan qaar ka mid ah howlaha nooca loo yaqaan ‘LINE’ ee loogu talagalay iPhone iyo kuwa kale ee casriga ah, sida wicitaannada codka, wicitaanada fiidiyowga, dukaanlaha wax lagu dhejiyo, Jadwalka waqtiga, iwm., Kuma jiraan nooca Ipadka.
Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo LINE loogu talagalay iPad-ka ee iPad 2 ama ka sareeya oo leh iOS 7 ama wixii ka dambeeya.
U soo dejiso LINE loogu talagalay iPad Air, iPad iyo iPad mini
Haddii aadan haysan arjigaan farriinta ee kujira ipad-kaaga iyo iPad mini, waxaad ku rakibi kartaa khadka tooska ah ee lagala soo xiriiro, ka App Store, oo aad ka heli doontid hoosta.
Ipadka oo loogu tala galay iPad ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.0 ama wixii ka dambeeya. IPad la jaan qaada. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Jarmal, Shiinees fudud, Shiinaha Shiine, Kuuriyaan, Faransiis, Indooniisiya, Ingiriis, Talyaani, Jabbaan, Malays, Boortaqiis, Ruush, Thai, Turki, Fiyatnaamiis.